Fa ny FSX/P3D mifanaraka dika kitiho eto
Ny Eurofighter Typhoon dia kambana-maotera, canard-Delta elatry, multirole mpiady.   ny rivo-doza Noforonin'Andriamanitra ny niforona ny fiarahana misalahy ny telo toko, EADS, Alenia Aeronautica sy Bae Systems, izay miasa amin'ny iray mihazona orinasa, Eurofighter GmbH , izay niforona tao 1986. Ny tetikasa no mitantana ny OTAN Eurofighter sy Tornado Management Agency, izay miasa ho toy ny voalohany mpanjifa.  Eurofighter Typhoon no efa namoaka serially ny EADS, Alenia Aeronautica, ary niforona ny fiarahana misalahy Bae Systems. Ny fiaramanidina no ho nahatonga eo ambanin'ny fifanarahana samihafa, atao hoe tranches, samy ho amin'ny ankapobeny fiaramanidina Nihatsara fahaiza-manao. Ny rivo-doza no niditra fanompoana amin'ny Aotrisiana Air Force, Italiana Air Force, Alemaina Air Force, Britanika Royal Air Force, ny Espaniola Air Force, ary ny Royal Air Force Saodiana. (Wikipedia)
Speedbrake - mampiasa ny / fanalahidy, na tsindrio ny bokotra tontonana.
Drag chute - mampiasa ny 'mifanohitra hevi' ny FS2004 endri-javatra, ka asa fanaovan-gazety sy mihazona ny fanalahidy F2, F1 fanalahidin'ny canel.
Mikopaka - ny tena rivo-doza manana ny mikopaka fehezin'ny ordinatera ka tsy misy mikopaka levers na gauges eo amin'ny tontonana. Ny modely AlphaSim taratra izany, fa ny azo ampiasaina mikopaka ny mahazatra keypresses. Misy telo fotsiny no mikopaka toerana - tsara ny tapaky ny lalana sy tanteraka izy.
Pilot Visors - ambany kokoa hatrany ao amin'ny mazava
Refuel hanadihady - izany dia mampiasa ny 2nd Hivoaka didy. Ampiasao ireto keypresses (na reset ny zavatra hafa (soso-kevitra) ao amin'ny fitendry andraikitra) -
Press ka hazòny ny fiovana fanalahidy, tap ny E key indray mandeha
Hanafaka ny fiovana manan-danja (zava-dehibe) tap ny 2 lakile avy hatrany (ao anatin'ny segondra 2 ny fanerena ny E key).
VC Switches - azo afenina ny kiririoka rehetra ao amin'ny vc ary amin'ny ankapobeny dia misy ny famaritana lahatsoratra tena hita ao amin'ny Rivo-doza. Ireo fiovam-po ireo dia tsy mandeha sy miasa fotsiny. Ny kofehy VC sasany dia manana FSX fiasa, ireto dia mpanamory fitaovam-piadiana sy jiro mijidina amin'ny ilany havia havia, ary ny fantsom-pahazavana navy sy ny tontonana, famindrana solika (fanakatonana ny motera) ary ny switch switch 2 eo amin'ny ankavanan'ny havanana.
Fanakatonana fampiasana VC Switches - fanakatonana no ho manindry ny Fuel Cutoff jiro eo ankavanana-lafiny hampionona ao amin'ny VC, ny jiro mena manana mpiambina izay tsy maintsy asandratra aloha. Ny jiro TSY MAINTSY ho niverina tany amin'ny toerana ON indray mandeha ny maotera dia spooling izy, raha tsy izany dia tsy ho hamerina azo atao.
Manomboka mampiasa VC Switches - Ny mpampiasa dia afaka manomboka na tamin'ny alalan'ny fanerena ny AutoStart bokotra amin'ny ankavia tontonana ambony, na ny roa Switches starterDouble azo ampiasaina eo amin'ny lafiny havanana hampionona ao amin'ny VC. Zava-dehibe ny manamarika fa, a) ny solika shutoff dia tsy maintsy ho ao amin'ny ON toerana araka ny voalaza etsy ambony, ary b) ny starterDouble Switches dia mahomby 'lohataona-mavesatra entana ", ny mpampiasa dia tsy maintsy tsindrio ka hazòny ny totozy eo aminy mandra-maotera trondro , izany raha ny tokony ho maka ny 6 segondra ny mitohy Nihazonako, ny 'tanana' tondron'ny totozy hanova ny 'totohondry' ny jiro raha mitoetra no efa natao. Raha hanafaka ny jiro teo anatrehan'i 6 segondra no miakatra, dia tsy maintsy begine ny paika indray. FANAMARIHANA: Ny starterDouble Switches dia tsy hanomboka ny fitaovana raha ny Ctrl-fiovàna-F1 keypress nampiasaina mba nakatona mialoha. Ny milina dia tokony ho nakatona mampiasa ny mena fanakatonana bokotra eo amin'ny throttle hampionona raha VC starterDouble bokotra no tokony hampiasaina. Raha nampiasa Ctrl-fiovana-F1, dia Ctrl-E dia ilaina mba hanomboka indray.
Aoriana Cockpit - afaka mitaingina ao aoriana ny VC tamin'ny alalan'ny fanerena sy mitana Ctrl-Ampidiro mandra-hetsika mijanona. Avy eo gazety fiovàna-Ampidiro ny hanangana ny fomba fihevitra araka izay mipetraka ho ambany loatra. Miverena noho ny Rivo-doza na reselecting na maika Ctrl-kitendry miverina hifindra forwards indray, dia manilika-kitendry miverina hifindra hiverina ho any amin'ny avo marina.
Smokesystem: misy bokotra ho an'ny toggling ny fotsy rivotra Asehoy fofona eo / eny an-tampon'ny vondrona bokotra ankavia.
AI Aircraft Labels: misy bokotra ho an'ny toggling ny AI fiaramanidina marika tamin'ny / eny an-tampon'ny vondrona bokotra ankavia. Izany no eo amin'ny toerana misy anao raha manana azy io teo amin'ny fanehoana safidy, dia toy izany no mampiseho mena lahatsoratra eo amin'ny bokotra.
Multiplayer: a ambany-Poly ambony FPS modely dia hita ho toy ny safidy mba Miezaka toy ny * mpilalao fiaramanidina * amin'ny Multiplayer fivoriana. Tsy ny AI modely ho toy izany.